Xaflad Xiritaan oo loo qabtay ardaydii ka qeyb-gashay Tartankii Qur’an aqris. | Radio Himilo
Home / Macluumaad / Xaflad Xiritaan oo loo qabtay ardaydii ka qeyb-gashay Tartankii Qur’an aqris.
Posted by: radio himilo June 22, 2017
Muqdisho – Markii ugu horraysay taniyo markii la aas’aasay idaacadda Himilo ee magaalada Muqdisho, waxaa maanta ay qabatay xaflad tartan xiritaan oo loo qabtay arday gaaraysa 30 kuwaas oo ku tartamay 114 Qur’anka.
Previous: Angel Di Maria oo lagu xukumayo bixinta canshuur uu gacan bidixeeyey xilligii Spain.
Next: Maqal:-Barnaamijka Martida Ramadaanka 22- 6 -2017